ကျောင်းဆရာ့..အိမ်မက် ~ MSU Portal
(ကုန်ဈေးနှုန်း၊ ၀န်ထမ်းလစာနဲ့ဆိုင်ပါတယ်..။ ဆရာ..အရေအတွက်.ဟာ
(၂) ဆရာ..ခါးဆက်..ပြတ်လာပါတယ်..။ ကြာပါပြီ..။
(၃) အင်္ဂလိပ်စာ..အားနည်းလာပါတယ်..။ ကြာပါပြီ..။
(၄) ကျောင်းတွေမှာ..စည်းကမ်း..လျော့နည်းလာပါတယ်..။ ကြာပါပြီ..။
စာကြည့်တိုက်များ..ခေတ်မမှီတော့ခြင်း..။ E- Learning
လုပ်တာ. .ကောင်းပါတယ်..။ ခေတ်မီ..စာအုပ်များလည်း..ပစ်ပယ်လို့..မရပါ..။
(၈) Workshop များ..မရှိတော့ခြင်း (သို့မဟုတ်) မသုံးတော့ခြင်း..။
မရှိတာက..ပိုများပါ့မယ်..။ ပရက်ရှာဂိတ်..မဖတ်တတ်တာ..၊ ယူနစ်မသိတာ..၊
ဗာနီယာကလစ်ပါ.မတိုင်းတတ်တာ..။ မိုက်ကရိုမီတာ..မတိုင်းဘူးတာ..၊ Hand Tools တွေ..နံမည်..မခေါ်တတ်တာ.. ဟာ.. Workshop နဲ့ဆိုင်ပါတယ်..။
Civil ဆိုလည်း..Civil အလျောက်..Electronic ဆိုလည်း..Electronic
အလျောက်..သုံးရတဲ့.. Instruments, Equipmentsများကို.. မသိသူ..များလာပါတယ်..။
(၁၀)ဆရာတွေကို.. ပညာတော်သင်တွေ.M.Sc, Ph.D သင်တန်းတွေ နိုင်ငံခြားကို..လွှတ်တာ..သဘောကျပါတယ်..။
Colombo Plan နဲ့..အင်္ဂလန်၊ ဂျပန်၊ ဂျာမဏီ၊ နယူးဇီလန်၊ အမေရိကန်ကို..
လက်တွေ့ပိုင်းဆိုင်ရာ.. အထူးပြုသင်ကြားပေးတဲ့.. တနှစ်၊ နှစ်နှစ်..သင်တန်းတွေ..လွှတ်တာမျိုး..ပြန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်...။)
ကျွန်တော်တို့..ငယ်စဉ်က.GTI မှာ...ဂျာမဏီ.က..ဒီဇယ်အင်ဂျင်Fuel System
လက်တွေ့ဆန်ပါတယ်..။ ခေတ်မှီပါတယ်..။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ..အသုံးတည့်ပါတယ်.။
M.Sc, PhD သင်တန်းတွေက..Subject တစ်ခုမှာ..ပါတဲ့..Topic တစ်ခုကို.
အခုလိုနေတာက..General Engineering ဆန်တဲ့..အောက်ခြေ..အပိုင်းမှာ..ပါ..။
Posted in: advice,Fun,guide,knowledge,literature,notice